Fanadihadiana Tranga RSS
Tahiry isam-bolana Aogositra 2014 1 Lahatsoratra Jona 2014 3 Lahatsoratra
Mey 2014 1 Lahatsoratra Avrily 2014 1 Lahatsoratra Febroary 2014 1 Lahatsoratra Janoary 2014 4 Lahatsoratra
Oktobra 2013 1 Lahatsoratra Jolay 2013 1 Lahatsoratra Jona 2013 2 Lahatsoratra
Septambra 2012 1 Lahatsoratra Jona 2012 1 Lahatsoratra Mey 2012 1 Lahatsoratra Avrily 2012 1 Lahatsoratra Marsa 2012 5 Lahatsoratra
Janoary 2012 1 Lahatsoratra Tantara misongadina mikasika ny Fanadihadiana Tranga	24 Jona 2014 Palestina: Mametraka Amin'ny Alalan'ny Sary Ny Andavanandrom-Piainana Mpanoratra Thalia Rahme · Mediam-bahoaka 21 Jona 2014 Manampy Ireo Bangaldeshita Mpianatra Hamaky Teny Amin'ny Tendron-dRantsa-Tanana Ny Crowdsourcing Mpanoratra Rezwan · Mediam-bahoaka 07 Jona 2014 Nitondra Fifaliana Ny Fandaharana Amin'ny Onjam-peo Momba Ny Fahasalaman'ny Saina Mpanoratra Sol del Carpio · Mediam-bahoaka Tantara Malaza Indrindra Manerantany 2 andro izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaFankahalambahiny atrehin'ny Syriana mpitsoaponenana iray mikasa ho any Eoropa
Tantara mikasika ny Fanadihadiana Tranga 09 Aogositra 2014
Famatsiana Vola Ny Toekarena : Rehefa Ny Fironana Amin'ny Tsenam-bola No Manavotra Ny Tsy Vitan'ny Banky Mpanoratra Mathieu Carrere · Mediam-bahoaka Tany aloha, tsy mahita sitraka mihitsy eny imason'ny rehetra ireo banky, ampangaina ho tendan-kanina loatra talohan'ny olana ara-bola, ary ankehitriny indray tsy manam-pahavononana...
Fampitovian-danja Ny Hafainganana Sy Ny Fahamarinam-Baovao Hisorohana Ny Vaovao Diso Ao Amin'ny Media Sosialy Mpanoratra Laura Morris · Fitaovana Ny Checkdesk dia tetikasa fanamarinam-baovao avy ao amin'ny media sosialy. Miara-miasa amin'ireo firenena manerantany miteny Arabo, manampy ireo trano fanoratan-gazety hanamarina ny tatitrany amin'ny alalan'ny fanamarinana ifarimbonan'ny besinimaro ity habaka fikarohana loharanom-baovao misokatra hoan'ny rehetra ity.
Wikitongues: Raketo An-tahiry Ny Tenim-pirenenao Mpanoratra Laura Morris · Antsafa Ny Wikitongues dia ezaky ny fiarahamonina mba hahafahan'ny olona manerantany mahafantatra sy mahita ireo tenim-pirenena 7000 manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny lahatsary sy bilaogy andraisan'ireo olom-pirenena anjara.
Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron'ny Tanora Ao Amin'ny Tranomboky Zavidovići Mpanoratra Laura Morris · Antsafa Any Bosnia sy Herzegovinia, maro ny mpianatra avy any ambanivohitra no mandeha bus isan'andro hianatra any ambonivohitra ka lany andro miandry bus ora maromaro tsy manao na inona na inona.Tsapan'ireo mpiandraikitra ny Tranombokim-Bahoaka Zavidovići izany ka nanoloran-dry zareo programa hanazarana ireo tanora ireo teknolojia vaovao.
20 Taonan'ny Fananganana Indray Taorian'ny Vanim-Potoana Sovietika : Tranomboky any Kazakhstan Mpanoratra Laura Morris · Kazakhstan Tamin'ny fianjeran'i Firaisana Sovietika,ao amin'ny firenena niankina taminy taloha no nahazo fahaleovantena fa nidina ihany koa ny fari-piainana - ary antin'izany ny fikatonan'ny sampan-draharaham-panjakana. Ao Kazakhstan, miasa hametraka indray ny programan'ny tranomboky (manerana ny firenena) indray ny Tranomboky Pushkin.
Diferencial CAC: Hacklab Ao Quito, Ekoatera Mpanoratra Juan Arellano · Antsafa Sehatra hoan'ireo tetikasa momba ny zavakanto sy ny kolontsaina nomerika ny Diferencial CAC, sehatry ny mpijirik, fiaraha-miasa, ary fampitana ireo karazan-kevitra hiaraha-miasa sy teknolojika izay hampiantranoin'ny Foiben'ny Zavakanto Ankehitriny ao Quito. Lahatsary sy resadresaka miaraka amin'ny mpanangana izany.
Milina Famoronana Tantara: Meograph Mpanoratra Rising Voices · Antsafa Namerina namoaka tafatafa iray nataon'ny Transom.org ny Rising Voices, izay niresaka tamin'i Misha Leybovich, ilay mpamorona sy PDG-n'ny Meograph - "tantara amin'ny lafiny efatra".
Mitodika Amin'ny Teknolojia: Mampiasa Ny Wikipedia Hiadiana Amin'ny Herisetra Mihatra Amin'ny Vehivavy Mpanoratra Lakshmi Sarah · Lanonana Ao anatin'ny hazakazaka fanitsiana sy famoronana lahatsoratra momba ny herisetra mihatra ny vehivavy ao amin'ny Wikipedia ny fihaonana voalohany Hack4Change tao India ary miara- miasa amin'ireo tetikasa media nomerika mampiasa tahirin-kevitra momba ny zon'ny vehivavy
Espaina : Nahomby Ny guifi.net, Tambajotra Maimai-Poana Tsy Mila Kofehy Mpanoratra L. Finch · Mediam-bahoaka Na fotoana inona na fotoana inona ao Espaina, olona an'arivorivony no miserasera amin'ny aterineto. Saingy mihamaro hatrany ireo Espaniola misafidy ny karazam-pitaovana mirazotra amin'ny aterineto, mba hialàna amin'ny sarany lafo avy amin'ireo tsena mpamatsy tolotra aterineto sy hanotofana ny hantsana nateraky ny fitaovana nomerika.
“Hanaovantsika Sarintany i Nizera”: Fatiman Alher Mpanoratra Rising Voices · Antsafa Fantaro i Fatiman, iray amin'ireo mpandray anjara amin'ny tetikasa "Mandrakitra an-tsarintany ho an'i Nizera", nanamafy ny fahaizana mampiasa dizitaly izy ary nampihatra izany tamin'ny fianarana jeografia nataony. Nanampy azy hahay mijery vaovao ny taotsarintany diizitaly.